ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလင်းပိုင်စိုး သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၁၈ရက်ကြာမှ မိသားစုကသိရှိရ - Myanmar Pressphoto Agency
MPA Myanmar News Politics Protester
Politics October 18, 2021 ·0Comment
နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေး ဆန္ဒပြသပိတ်စစ်ကြောင်းများတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ကိုလင်းပိုင်စိုး သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၈ရက်အကြာအောက်တိုဘာလ၁၈ရက်နေ့တွင်မှ မိသားစုက သိရှိခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
ကိုလင်းပိုင်းစိုးသည် ဖမ်းဆီးခံရစဉ်ကတည်းက နှိပ်စက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး စစ်ကြောရေးသို့ ရောက်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့တွင် သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုလင်းပိုင်စိုးနှင့် နီးစပ်သူများက ဆိုသည်။
“ဆုံးတာကကြာပြီဗျာ။ သတင်းကအခုမှထွက်လာတာ။ အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့တည်းက ကျတာဗျ။ ကျနော်တို့က ကြားထဲမှာသူ့အတွက် သတင်းတွေကို စိတ်ပူပြီးတော့မှထုတ်နေတာဗျ။ တကယ့်တကယ်က ဖမ်းခံရပြီးနောက်ရက်မှာ ဆုံးသွားခဲ့တာဗျ။ နန်းတွင်းတပ်မှာထဲက လူမျိုးခြားဆိုပြီးတော့ ဝိုင်းရိုက်ကြတာ အသက်ကမြော့မြော့ပဲ ကျန်တယ်။ စစ်ကြောရေးရောက်တော့ဆုံးတာ။ အခုမှ မကြည်ပြာ(အမည်လွှဲ)ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့မှ သိရတာပေါ့ ” ဟု နေပြည်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ကိုနေသမိုင်းကပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့တွင် ကိုလင်းပိုင်စိုးသည် မန္တလေးရှိ နေအိမ်တစ်ခုတွင် ၎င်း၏ရဲဘော်များဖြစ်သည့် ကိုငြိမ်းမင်းသန့်နေအိမ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ မကြည်ကြည်ဝင်းတို့နှင့်အတူ စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
“သူသေတာကိုတော့ ကျနော်တို့ တိုက်ရိုက်သိရတာမဟုတ်ပါဘူး။ သမဂ္ဂဘက်က ညီလေးတွေ ပြောပြလို့သိရတာပါ။ စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့။ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး ” ဟု ကိုလင်းပိုင်စိုး၏ အကိုဖြစ်သူကဆိုသည်။
ကိုလင်းပိုင်စိုးသည် ကျောက်ဆည်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဒြပ်သတ္တုပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးနှစ် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဂေါ်ရခါးလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကိုလင်းပိုင်စိုးသေဆုံးခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး “ဒါကြီးကတော်တော်ဆိုးဆိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ။ သတ်တဲ့အပြင် အလောင်းဖျောက်တဲ့သတင်းအစအနရော ဖျောက်တာမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ ” ဟု ကိုနေသမိုင်းကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင််ငံတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်နေသူများကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ကြောရေးစခန်းများတွင် နှိပ်စက်စစ်မေးလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့စစ်မေးရာတွင် ဘာသာခြားများ(ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူများ)၊ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အား ထောက်ခံသူများဆိုလျှင် ပိုမို၍ ပြင်းထန်စွာ နှိပ်စက်လေ့ရှိသည်။
Family Learns Death of Arrested Strike Leader Ko Lin Paing Soe after 18 Days of Death
Family only learned the death of Naypyitaw and Mandalay strikes leader, Gurkha ethnic, Ko Lin Paing Soe, after 18 days of death, according to family.
When Ko Lin Paing Soe was arrested, he had torture wounds and he died on the day he arrived at the interrogation – October 1, according to those close to him.
“It’s been long since he died. The news only came out now. He fell since October the 1st. We’ve been anxious about his news these days. He really diedaday after being arrested. As he was of different ethnicity, he was badly beaten since the camp, he was almost dead already. When he arrived at the interrogation, he died. We only learned it just now after Ma Kyi Pyar (alias) phoned in”, saidaNaypyitaw students union member Ko Nay Thamine.
On September 30, Ko Lin Paing Soe was arrested by the military along with Ma Kyi Kyi Win who wasavisitor as well, when he was visiting his fellow comrade Ko Nyein Min Thant’s home in Mandalay.
“We didn’t learn his death directly. We only knew when the students from the Students Union told us. We’re sad. We have nothing to say”, said Ko Lin Paing Soe’s brother.
Ko Lin Paing Soe wasametallurgical engineering student at Kyaukse University of Technology andaBuddhist Gurkha ethnic.
Regarding the death of Ko Lin Paing Soe, “It’s gotten too bad. Plus to murdering him, it is disappearing of even the news of disappearing his body”, said Ko Nay Thamine.
In Myanmar, after the terrorist military coup, anti-military dictatorship protesters were arrested and tortured in interrogation camps.
In those interrogation sessions, those of different religions (non-Buddhists), those of different sexes, student unions and the National League for Democracy supporters are more severely tortured.
#KoLinPaingSoe #StrikeLeader #Dead #Gurkha #MPA
human right violations (50)